အဇါဒါရီ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၊ ရဘီအာ ၊ဆော်ဒီ ၊ photos
ဇူလိုငျ ၂၀, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် အား ဆော်ဒီ နိုင်ငံ ရဘီအာ အရပ် ရှိ အေမာမ် ဘာရာ တွင် ကျင်းပ နေသည့် အဇါဒါရီ ပုံရိပ်အချို့  ဖြစ်ပါတယ်။
အဇါဒါရီ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၊ အူလူမီးယေမြို့ ၊အီရန် ၊ photos
ဇူလိုငျ ၂၀, ၂၀၁၇ - ၉:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် အချိန်အခါတွင် အီရန် နိုင်ငံ အူလူမီးယေမြို့ ရှိ မစ္စဂျစ် တစ်ခု တွင် ကျင်းပ နေသည့် အဇါဒါရီ ပုံရိပ်အချို့  ဖြစ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် မြင်ကွင်း ၊ ဟဇရသ်အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာ ၊ photos
ဇူလိုငျ ၂၀, ၂၀၁၇ - ၉:၃၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် နိုင်ငံကရ်ဗလာ ရှိ ဟဇရသ်အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာ တော်အတွင်း အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် ဆိုင်ရာ မြင်ကွင်း အချို့ ကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) သခင်မကြီး ၏ မဂ်ျလစ် နှင့် အဇါဒါရီ အတွက် ပြင်ဆင် နေမှု ၊ လက်ခနောင်း ၊ အိန္ဒိယ / photos
မတျ ၂, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ၏ ရှီအာမွတ်စလင် အမြောက်အများ နေထိုင်လျက် ရှိသည့် လက်ခနောင်း မြို့ တွင် သခင်မကြီး ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) သခင်မကြီး ၏ မဂ်ျလစ် နှင့်အဇါဒါရီ အတွက် ပြင်ဆင် နေမှု များ၏ ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) သခင်မကြီး ၏ မဂ်ျလစ်များနှင့် မရ်ဂျာတော်များ / photos
မတျ ၂, ၂၀၁၇ - ၇:၄၀ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဘီဘီဖွာတွေမာ (စ.အ) သခင်မကြီး ၏ မဂ်ျလစ်များကို အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်နေသည့် မရ်ဂျာတော်များ၏ ရုံးခန်းများ ကျင်းပခဲ့ သည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ် ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် ဦးဆောင်သည့် ဘီဘီ ဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂ်ျလစ် ပထမ ည / photos
ဖဖေျောဝါရီ ၂၇, ၂၀၁၇ - ၁၁:၀၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ဦးဆောင်သည့် ဘီဘီ ဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂ်ျလစ် ပထမ ည ၏ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ မဂ်ျလစ်တွင် အီရန် လက်ရှိအစိုးရ အကြီးအကဲများ ၊ အိုလမာ နှင့် မိုအ်မင်အမျိုးသားများ မိုအ်မင် အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်နေရာယူခဲ့ကြပါတယ်။
စဟီးဘုခါရီ ကျမ်းတွင် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ကိုဒုက္ခဘေး ခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်း နှင့်ပတ် သတ်ပြီး ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါးပါး လာရှိပါသလား ?
ဖဖေျောဝါရီ ၁၇, ၂၀၁၇ - ၈:၀၂ နံနကျ
၁။ ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) အနေဖြင့် မိန့် ကြားတော်မူပါသည်။ အကြင်မည်သူမဆို ကျနော်၏ သမီးတော် ဖွာတွေမာ (စ.အ) ကို ဒုက္ခပေးမည် ၊နှောက်ယှက်မည် ၊သူမကို စိတ်ဆိုးအောင် ပြုမည်ဆိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို ဒုက္ခပေးခြင်း စိတ်ဆိုး အောင်လုပ်ခြင်း မည်၏။ အကြင်မည်သူမဆို ကျွန်ုပ် ကို ဒုက္ခပေးမည်ကျွန်ုပ်ကို စိတ်ဆိုးအောင် ပြုမည် ဆိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်အား ဒုက္ခပေးခြင်း စိတ်ဆိုး အောင်လုပ်ခြင်း မည်၏။
စဟီးဘုခါရီ ကျမ်းတွင် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ကိုဒုက္ခဘေး ခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်း နှင့်ပတ် သတ်ပြီး ဟဒီးစ် တစ်ပါးပါး လာရှိပါသလား ?
မေးခွန်းအကျယ် ကျနော် မေးခွန်းကတော့ စဟီးဘုခါရီ မှာ လာရှိ တဲ့ ဟဒီးစ်တော် နှစ်ပါး နှင့်ပတ်သက် တာဖြစ် ပါတယ်။ ဤ ဟဒီးစ်တော် နှစ်ပါး ဟာ ဤကျမ်း ၏ စာမျက်နှာ ဘယ်လောက် နှင့် ဘယ်အပိုင်း တွင် တင် ပြထားတာ ဖြစ်ပါသလဲ ?
ဒီဇငျဘာ ၄, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၈ ညနေ
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ဘဝသမိုင်းအကျဉ်း ကို အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ၏ အမည်အား အရိုအသေပြုခြင်း
နိုဝငျဘာ ၇, ၂၀၁၆ - ၆:၂၈ နံနကျ
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး ကို အရိုအသေ အလေးအမြတ် ပြုဖို့ နှင့် သခင်မကြီး၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှု သည် မွတ်စလင်မ် အားလုံး အတွက် ထင်ရှား ပြတ်သားနေပါတယ်။ သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ၏ အမည်အား အရိုအသေပြုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ရီဝါယသ်တော်လေး ကို အသေအချာ နှလုံးသွင်း လေ့လလာ လိုပါတယ်။
ဟဇရသ် မိုဟ်စင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ? မည်ကဲ့သို့ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသနည်း ? ၎င်းကို သတ်သူ ကကော် မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ? (၁)
နိုဝငျဘာ ၅, ၂၀၁၆ - ၁၀:၅၇ ညနေ
အဖြေ။ ။ အမာနသ် ကိုရှေ့တန်းတင် ၍ ၎င်း ၊ အစွန်းရောက်မှု နှင့် မုန်းတီး မှုကို ဘေးဖယ်၍ တစ်နည်း မြတ်အလ္လာဟ် ကို ကြောက်ပြီး အမှန်တရားကို သာ တင်ပြမှုကို ရင်ဝယ်ပိုက် ပြီး အဖြေပေးရမည်ဆိုလျှင်အောက်ပါအတိုင်း အဖြေတိုတို နှင့်ထိထိမိမိ ထွက်ပါမည်။ စွန်နီ၊ရှီအာ ရီဝါရသ်တော်များ ၊သမိုင်း အထောက်အထား များ အရ ဟဇရသ် မိုဟ်စင် သခင်သည် အေမာမ်အလီ (အ.စ) သခင်နှင့် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) သခင်မ တို့ ၏ သားသမီးများမှ တစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဂျနာဗေ အိုမရ် (သို့) ကန်ဖေဇ်(ခ)ကွန်ဖေဇ် မှ ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးကို တံခါး နှင့် တတိုင်ကြား ဖိညှပ် ခဲ့ပါသည်။ ဖိညှပ်မှုဒဏ်ကြောင့် သခင်မကြီး ၏ နံရိုးကျိုးခဲ့ပါသည်။ သခင်မကြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်းရှိ ကလေး (ဟဇရသ်မိုဟ်စင်) ပျက်ကျ(ခ) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ (အသေးစိတ် အထောက် အထား အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အေးအေးနှင့် အသိဥာဏ်တွဲပြီးဖတ်ပေးရန် လေးစားစွာ မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။)
မမေ့အပ်သည့် အေမာမ် စဂျာဒ် (အ.စ) ၏ စံပြ လုပ်ရပ် တစ်ခု
နိုဝငျဘာ ၄, ၂၀၁၆ - ၁၁:၂၀ နံနကျ
မမေ့အပ်သည့် အေမာမ် စဂျာဒ် (အ.စ) ၏ စံပြ လုပ်ရပ် တစ်ခု ကိုအောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။
အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မွေးနေ့ အခမ်းအနား ၊သီရိလင်္ကာ /photos
ဩဂုတျ ၁၇, ၂၀၁၆ - ၁၁:၀၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကို သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်းရှိ ဝါလာဂျနာ မြို့ တွင် မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နှင့် ဂျအ်မေအသွလ်မွတ်စ်တဖွာ (ဆွ) ကိုယ်စားလှယ် တို့မှ ပူးပေါင်း ကြီးမှူး ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဇေယာရသ် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ဆိုင်ရာ ညီလာခံ ၊ မရ်ှဟဒ် /photos
ဩဂုတျ ၁၅, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ မရ်ှဟဒ် မြို့ တွင် ((ဇေယာရသ် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ်များ ၏ ယုံကြည်မှု )) ဆိုသည့် အမည် နှင့် ညီလာခံတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရှီအာ၊ စွန်နီ အာလင်မ် များ တက်ရောက် နေရာယူခဲ့ပါတယ်။
စွန်နီ ညီနောင်များ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါ။စဉ်းစားပေးပါ။
ဩဂုတျ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၀:၃၄ နံနကျ
မေးခွန်း ။ ။ ဘာကြောင့် ….. မိမိတို့၏ အကီဒါ အရ စဟီးကျမ်းကညွန်းပြနေသည့် အရာ ကုန်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို လက်လွတ်ပြီး စဟီးကျမ်းမဟုတ်သည့် ကျမ်း ကညွန်းပြနေသည့် အရာ ကု၇်အာန် နှင့် စွန္နသ် ၊ ကုရ်အာန် နှင့် စွန္နသ် ဟု အော်နေရပါသနည်း ? မေးခွန်း ။ အဘယ်ကြောင့် ကုရ်အာန် ပြီးလျှင် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အကြောင်းကို မတင်ပြုဘဲ ဆွာဟာဗာ ၊ဆွာဟာဗာအကြောင်းကို သာ အလေးပေးတင်ပြရပါသနည်း ?
(ဒဲဟ်ဟေကရာမသ် ) အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲ ၊ ခိုရာစာန်ပြည်နယ် /photos
ဩဂုတျ ၅, ၂၀၁၆ - ၉:၅၀ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။(ဒဲဟ်ဟေကရာမသ် ) ဆိုသည်မှာ သခင်မကြီး ဟဇရသ် မာစူမာ (စလာမ်မွန်လ္လာဟ်အလိုင်ဟာ) နှင့် သခင်မကြီး၏ အစ်ကို အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) မွေးဖွားသည့် မွေးနေ့ နှစ်ခု အကြား ကွာနေသည့် ၁၀ ရက်တာ အတိုင်းအတာ ကို အီရန် တွင် ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွက် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်မည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲ ကို ခိုရာစာန်ပြည်နယ် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နှမတော်၏ မွေးနေ့ကို အစ်ကို ၏ ရောင်ဇာတော်တွင် ကျင်းပ၊မရ်ှဟဒ် /photos
ဩဂုတျ ၅, ၂၀၁၆ - ၉:၄၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နှမတော် ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ မာစူမာ (စလာမ်မွန်လ္လာဟ်အလိုင်ဟာ) ၏ မွေးနေ့ကို အစ်ကို အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) ၏ ရောင်ဇာတော်တွင် ကျင်းပနေသည့်ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဆွာဒစ် (အ.စ) အတွက် မဂ်ျလစ်အဇါ ၊ ကရ်ဗလာ /photos
ဇူလိုငျ ၃၁, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့ အတွက် အီရတ် နိုင်ငံ ကရ်ဗလာမြို့ ရှိ အေမာမ် ဟိုစိန် (အလိုင်ဟေစ်စလာမ် ) ရောင်ဇာတော် နှင့် ဟဇရသ်အဘာစ် (အလိုင်ဟေစ်စလာမ် )ရောင်ဇာတော်မှ သာသနာဝန်ထမ်းများ မှ အဇါဒါရီ ပြုလုပ်နေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဆွာဒစ် (အ.စ) အတွက် မဂ်ျလစ်အဇါ ၊ ကွမ်း /photos
ဇူလိုငျ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့ အတွက် မဂ်ျလစ် တစ်ခုအား အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်း မြို့ ရှိ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလဝီ ဂိုရ်ဂါနီ အိမ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဂျန္နသ်သွလ်ဗကီး ရှိ ရောင်ဇာတော်များ အတွက် ဆန္ဒပြ ၊အိန္ဒိယ /photos
ဇူလိုငျ ၁၇, ၂၀၁၆ - ၅:၄၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရှောင်ဝါလ ၈ ရက်နေ့ ကျရောက်ခဲ့သည့် ဂျန္နသ်သွလ်ဗကီး ရှိ ရောင်ဇာတော်များ အပျက်ခံခဲ့ရမှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် ဆော်ဒီ ဘုရင်နှင့်မဟာမိတ်များ ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ပွဲ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုင်ဒဲရ်အါဗါဒ် မြို့ တွင် ပြု လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇူလိုငျ ၁၇, ၂၀၁၆ - ၅:၁၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရှောင်ဝါလ ၈ ရက်နေ့ ကျရောက်ခဲ့သည့် ဂျန္နသ်သွလ်ဗကီး ရှိ ရောင်ဇာတော်များ အပျက်ခံခဲ့ရမှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် ဆော်ဒီ ဘုရင်နှင့်မဟာမိတ်များ ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ပွဲ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂိုစီ မြို့ငယ်လေးတွင် ပြု လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။